Gerund ဆိုပြီး လူသိနည်းတဲ့ Ving form -
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Myat Moe	Comment(0)
Verb လိုလို Noun လိုလို ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်နေတဲ့ Gerund လေးဆိုသည်မှာလည်း…
ယောင်းတို့ရေ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မတင်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ သင်ခန်းစာဘက်လေး ပြန်လှည့်ပါရစေနော်။ အက်မင်တို့ပြောပြောနေတဲ့ Ving form ဆိုတာလေးပေါ့။ တကယ်တော့ ဒီလိုနာမည်တပ်တာကိုက မှားနေတာ။ သူက Verb ကို ဟုတ်မနေတာ။ မူလ Verb ကို -ing ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ noun form လေး။
ပြောရရင် I am drinking milk – ကျွန်မနွားနို့သောက်နေတယ် ဆိုပြီး Drinking ကို ကြိယာအနေနဲ့မသုံးဘဲ Drinking milk makes our bone stronger – နွားနို့သောက်ခြင်းဟာ အရိုးတွေကို သန်မာစေပါတယ် ဆိုပြီး Drinking ကို နာမ်တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးထားတာပါ။ ဒီလိုမျိုး -ing form ကို Noun အနေနဲ့သုံးတာကို Gerund လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒါဆို Gerund ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးသလဲ? ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ Noun နေရာမှာသုံးပါတယ်။ Noun နေရာမှာ သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် gerund ရှေ့မှာ နာမဝိသေသနရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Eg – Travelling by plane is faster than taking the car.
Eg – Careful planning is necessary in this job.
နောက်တစ်နေရာကကတော့ Preposition ပါတဲ့ အချို့သော စကားစုတွေမှာပါ။ afraid of, interested in, keen on, bored with, sorry for, crazy about, tired of, fed up with, have difficulty in, fond of, look forward to, good at အစရှိတဲ့ Prepositional phrase တွေနောက်မှာသုံးပါတယ်။ အများစုကတော့ Adjective+proposition phrase တွေနောက်မှာ ဆိုတာလေး မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်နော်။
Eg –I’m sorry for breaking your glasses.
Eg – She is fond of cooking.
နောက်သုံးစရာကတော့ ကြိယာတွေရဲ့ နောက်မှာပါ။ >>> avoid, keep, deny, mind, dislike, remember, enjoy, stop, finish, suggest, love, hate, try, etc.. <<< verb တိုင်းရဲ့နောက်မှာတော့ သုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ လွယ်လွယ်မှတ်ချင်ရင်တော့ continuous form အနေနဲ့ သိပ်မတွေ့ရတဲ့ verb တွေနောက်မှာ အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် She is minding တို့ I am remembering တို့ They are loving တို့ သုံးလေ့မရှိဘူးမလား။ အဲ့လိုသုံးလေ့မရှိတဲ့ verb တွေနောက်မှာ Gerund လိုက်ပါတယ်။
Eg – He has finished talking.
Eg – I don’t mind waiting.
Related article >>> အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် တိုးတက်စေမယ့် စာအုပ်များ
နောက်တစ်ခုကတော့ အချို့ Verb and noun အစုတွဲတွေနောက်မှာပါ။ can’t help (မရပ်နိုင်), it’s no good (ကောင်းကွက်မရှိ), can’t stand (သည်းမခံနိုင်), it’s not worth (မတန်), it’s no use (အသုံးမဝင်) စတဲ့ expression တွေနဲ့ တွဲသုံးပါတယ်။
Eg – It’s not worth repairing the TV. Just buyanew one.
Eg – Sorry, I can’t help laughing. It was justafunny story!
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Be/get + used + to + gerund ပါ။ Used to အသုံးကတော့လုပ်ကျင့်ရှိတယ်၊ လုပ်နေကျရှိတယ်၊ အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒီနေရာမှာ Used to + infinitive (V1) နဲ့မမမှားဖို့တော့ သတိပေးပါရစေနော်။ အဓိပ္ပာယ်က လုံးဝကွဲတာမို့ပါ။
Eg – I used to live in Yangon. (ရန်ကုန်မှာနေဖူးတယ်၊ အခုလက်ရှိတော့ မနေတော့ဘူး။)
Eg – I am used to living in Yangon. (ရန်ကုန်မှာ နေသားကျနေပြီ။ အရင်တုန်းကလောက် အခက်အခဲမရှိတော့ဘူး။)
ဒီလိုဆိုတော့ လွယ်မလိုလိုနဲ့ မှတ်စရာတွေ အတော်များသားနော်။ အက်မင်တို့ကသာ သတိလက်လွတ်သုံးနေတာ။ အပေါ်က နည်းတွေလိုမျိုး ဝေဝေဆာဆာသုံးတတ်ရင် အတော်လှတဲ့ အသုံးလေး။ အက်မင်တော့ သုံးဖြစ်တယ်။ ကဲ ယောင်းတို့သိထားတဲ့ gerund အသုံးလေးတွေ ရှိရင်လည်း မျှဝေပေးပါဦး။ အက်မင့် point လေးတွေကိုလည်း သတိရရင် မျက်ရည်လည်.. အဲဟုတ်ပေါင်.. သတိရရင် ရသလိုလေး သုံးပေးကြပါဦးလို့။
Verb လိုလို Noun လိုလို ဟိုယောငျယောငျ ဒီယောငျယောငျဖွဈနတေဲ့ Gerund လေးဆိုသညျမှာလညျး…
ယောငျးတို့ရေ ဒီတဈပတျမှာတော့ မတငျဖွဈတာတျောတျောကွာသှားပွီ ဖွဈတဲ့ သငျခနျးစာဘကျလေး ပွနျလှညျ့ပါရစနေျော။ အကျမငျတို့ပွောပွောနတေဲ့ Ving form ဆိုတာလေးပေါ့။ တကယျတော့ ဒီလိုနာမညျတပျတာကိုက မှားနတော။ သူက Verb ကို ဟုတျမနတော။ မူလ Verb ကို -ing ပေါငျးထညျ့ထားတဲ့ noun form လေး။
ပွောရရငျ I am drinking milk – ကြှနျမနှားနို့သောကျနတေယျ ဆိုပွီး Drinking ကို ကွိယာအနနေဲ့မသုံးဘဲ Drinking milk makes our bone stronger – နှားနို့သောကျခွငျးဟာ အရိုးတှကေို သနျမာစပေါတယျ ဆိုပွီး Drinking ကို နာမျတဈခုအနနေဲ့ သုံးထားတာပါ။ ဒီလိုမြိုး -ing form ကို Noun အနနေဲ့သုံးတာကို Gerund လို့ချေါပါတယျ။
ဒါဆို Gerund ကို ဘယျနရောတှမှော သုံးသလဲ? ခုနက ပွောခဲ့သလိုပဲ Noun နရောမှာသုံးပါတယျ။ Noun နရောမှာ သုံးတဲ့အတှကျကွောငျ့ gerund ရှမှေ့ာ နာမဝိသသေနရှိနနေိုငျပါတယျ။
နောကျတဈနရောကကတော့ Preposition ပါတဲ့ အခြို့သော စကားစုတှမှောပါ။ afraid of, interested in, keen on, bored with, sorry for, crazy about, tired of, fed up with, have difficulty in, fond of, look forward to, good at အစရှိတဲ့ Prepositional phrase တှနေောကျမှာသုံးပါတယျ။ အမြားစုကတော့ Adjective+proposition phrase တှနေောကျမှာ ဆိုတာလေး မှတျထားလို့ ရပါတယျနျော။
နောကျသုံးစရာကတော့ ကွိယာတှရေဲ့ နောကျမှာပါ။ >>> avoid, keep, deny, mind, dislike, remember, enjoy, stop, finish, suggest, love, hate, try, etc.. <<< verb တိုငျးရဲ့နောကျမှာတော့ သုံးလို့အဆငျမပွပေါဘူးနျော။ လှယျလှယျမှတျခငျြရငျတော့ continuous form အနနေဲ့ သိပျမတှရေ့တဲ့ verb တှနေောကျမှာ အသုံးမြားပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ She is minding တို့ I am remembering တို့ They are loving တို့ သုံးလမေ့ရှိဘူးမလား။ အဲ့လိုသုံးလမေ့ရှိတဲ့ verb တှနေောကျမှာ Gerund လိုကျပါတယျ။
Related article >>> အင်ျဂလိပျစာစှမျးရညျ တိုးတကျစမေယျ့ စာအုပျမြား
နောကျတဈခုကတော့ အခြို့ Verb and noun အစုတှဲတှနေောကျမှာပါ။ can’t help (မရပျနိုငျ), it’s no good (ကောငျးကှကျမရှိ), can’t stand (သညျးမခံနိုငျ), it’s not worth (မတနျ), it’s no use (အသုံးမဝငျ) စတဲ့ expression တှနေဲ့ တှဲသုံးပါတယျ။
နောကျဆုံးတဈခုအနနေဲ့ကတော့ Be/get + used + to + gerund ပါ။ Used to အသုံးကတော့လုပျကငျြ့ရှိတယျ၊ လုပျနကေရြှိတယျ၊ အကငျြ့ဖွဈတယျဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒီနရောမှာ Used to + infinitive (V1) နဲ့မမမှားဖို့တော့ သတိပေးပါရစနေျော။ အဓိပ်ပာယျက လုံးဝကှဲတာမို့ပါ။
Eg – I used to live in Yangon. (ရနျကုနျမှာနဖေူးတယျ၊ အခုလကျရှိတော့ မနတေော့ဘူး။)
Eg – I am used to living in Yangon. (ရနျကုနျမှာ နသေားကနြပွေီ။ အရငျတုနျးကလောကျ အခကျအခဲမရှိတော့ဘူး။)
ဒီလိုဆိုတော့ လှယျမလိုလိုနဲ့ မှတျစရာတှေ အတျောမြားသားနျော။ အကျမငျတို့ကသာ သတိလကျလှတျသုံးနတော။ အပျေါက နညျးတှလေိုမြိုး ဝဝေဆောဆာသုံးတတျရငျ အတျောလှတဲ့ အသုံးလေး။ အကျမငျတော့ သုံးဖွဈတယျ။ ကဲ ယောငျးတို့သိထားတဲ့ gerund အသုံးလေးတှေ ရှိရငျလညျး မြှဝပေေးပါဦး။ အကျမငျ့ point လေးတှကေိုလညျး သတိရရငျ မကျြရညျလညျ.. အဲဟုတျပေါငျ.. သတိရရငျ ရသလိုလေး သုံးပေးကွပါဦးလို့။
Tagged gerund, Knowledge, language, Sunday English
Posted on February 8, 2019 February 8, 2019 Author Myat Moe
Posted on December 21, 2017 Author Khine
မိန်းကလေးဆိုတာ အားနည်းသူတွေဆိုတဲ့ အမြင်မှားကြီး ပြင်ဖို့သင့်ပါပြီ
Crime Knowledge Women News
Posted on June 13, 2018 July 25, 2018 Author Aye Mon Kyaw
အဘွားအိုတွေရဲ့ လက်ထဲမှာတော့ “ဂျပန်တွေ မင်းတို့တွေ လိပ်ပြာလုံရဲ့လား?” စတဲ့ စာတွေ ကိုင်ထားကြပြီး သူတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာတော့ ဖုံးကွယ်လို့မရတဲ့ နာကျည်းမှုတွေ၊ နာကျင်ခံစားရတာတွေကို မြင်နေရပါတယ်